विश्वकप- तेस्रो स्थानका लागि आज ७ः ४५ बजे इंग्ल्याण्ड र बेल्जियम भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? « News24 : Premium News Channel
विश्वकप- तेस्रो स्थानका लागि आज ७ः ४५ बजे इंग्ल्याण्ड र बेल्जियम भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । रुसमा जारी फिफा विश्वकप २०१८ अन्तरगत शनिबार (आज) तेस्रो स्थानको लागि इंग्ल्याण्ड र बेल्जियमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यी दुईको खेल नेपाली अनुसार पौने ७ः ४५ बजे हुनेछ ।
साफ च्याम्पियनसिप : आज नेपालले श्रीलंकाविरुद्ध खेल्दै, फाइनलमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य
पारा रेफ्री सेमिनार तथा रिफ्रेसर कोर्समा नेपालबाट ३ जना सहभागी हुने
दोश्रो आईएमइ जेटीआई ग्रान्ड जुनियर खुला टेनिस प्रतियोगिता हुने